.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song လုပ်နည်း အပိုင်း ( ၂ ) စာသားထည့်နည်းနဲ့ save လုပ် သိမ်းနည်း
Flash Song လုပ်နည်း အပိုင်း ( ၂ ) စာသားထည့်နည်းနဲ့ save လုပ် သိမ်းနည်း
အခု အပိုင်း ဒီပို့စ်လေး က စာသားထည့်နည်းနဲ့ save လုပ် သိမ်းနည်းပေါ့နော်။
တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာက အကုန်လုံးကို ဒီတိုင်းကြည့်ရင် မူးသွားမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဆွစ်မက် ဆော့ဝဲ ကို
တစ်ခါတည်း ဖွင့်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်း စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ရှင်းသွားမှာပါ။
အပိုင်း (၂) မှာ ပုံအရှင်တွေ ဘတ်တွန် တွေထည့်ပီး သွား ပြီ ဆိုရင်တော့ စာသားထည့် ပြီး save လုပ်ဖို့ ပဲ
ကျန်တော့တာပေါ့။စာသားထည့်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး အောက်က ပုံမှာအနီရောင်လေး နဲ့ ၀ိုင်း ပြထားတဲ့
ထည့်ထားတဲ့ အတွက် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ ဘောက် တစ်ခု ကျလာရင် ပိတ်လိုက် ပါ။ပြီးရင် မိမိ ထည့်ထားတဲ့
စာသားထည့်မယ် ဆိုရင် ကောင်းတာကတော့ Office word မှာ စာသားတွေ ရိုက်ထည့်ပြီး ကော်ပီ
ယူထည့်တာ ပို အဆင် ပြေမယ် ထင်ပါတယ် ။အောက်မှာ ပြထားပါတယ် ။
ချစ်ဦး ပုံပြင် သီချင်းမှာဆိုရင် 250 နားမှာ အဆိုဝင် ပါတယ် အောက် မှာ ပြထားပါတယ်နော်။
ဒါဆို ရင် အဲဒီ 250 နားမှာ စာသားထည့်ရအောင်နော် ။အရင်ဆုံး Office word မှာရိုက်ထားတဲ့ စာသားကို
စာသားထည့်ချင်တဲ့ နေရာ မှာ ကလစ်ချလိုက်ပါ။ပြီးရင် ညာကလစ်ထောက်ပီး Paste ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အောက် က ပုံအတိုင်း စာသားရောက်သွားရင် effect ထည့်ရပါမယ်။ effect ထည့်ဖို့ တွက်
စာသားထည့် ထားတဲ့ text လိုင်းလေး ကိုအောက်က ပုံမှာပြထားပါတယ်။ အပေါ်က မှတ်ထားခဲ့တဲ့
250 နား မှာကလစ်ထောက် ညာကလစ်နှိပ်ပီး effect ထည့်ပါမယ်။ ထုပ်ထုပ် ထည့်တာတော့
effect ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်း အပြာရောင် effect လိုင်းလေးပေါ်လာပါမယ်။
မိမိ ထည့်တဲ့ အပြာရောင် effect လိုင်းလေးဟာ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်ပြီ အ၀င်အထွက် ကိုက်သွားပြီ
ဆိုရင်တော့ စာသားမှာ ကာလာရှိတ်လေး ထည့်ရအောင်နော်။ကာလာရှိတ်ထည့်ဖို့အတွက် ပုံရဲ့
တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီမှာ တစ်ကွက်ချင်းစီ ကို နှိပ်ပြီး မိမိ ထည့်လိုတဲ့ အရောင်ကို ရွေးလိုက်ပါ။
ချစ်ဦးပုံပြင် မှာ တော့ အစိမ်းရောင်လေးကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။
Effect ပေါ်မပေါ် အောက်က ပုံမှာ အနီရောင်လေး ကိုဝိုင်းထားတာ နဲ့ နှိပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
စာသား တစ်ကြောင်း ထည့်တာ ပြီးသွားပါပီ။ နောက်တစ်ကြောင်း ထည့်ဖို့ Office word ကိုသွားပြီး
အပေါ်ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ကော်ပီယူပါ အရင်ထည့်ခဲ့တဲ့ နေရာ ရဲအောက်နား မှာ ကလစ်ချပြီး
စောန ကလိုထည့်ပါမယ်။စာသားထည့်ပြီးသွားရင် စောနကလို Effect ထည့်ပါမယ်။ အဲဒီတွက်
အပေါ်ကလို မလုပ်တော့ပါဘူး ။ပထမ စာကြောင်းမှာ ထည့်ခဲ့တဲ့ Effect ကို ကော်ပီ ယူလိုက်ပါနော်။
ညာကလစ်ထောက်ပြီး Paste Effect ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။ထည့်ပြီးရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း
အ၀င်အထွက် ကိုက် မကိုက်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်။ကော်ပီယူထည့်တာဆိုတော့ Shadow အစိမ်းရောင်လေး
အဲဒီ တိုင်းပဲ စာသားတွေ Effect တွေ ထည့်ပီးရင်တော့ စာသားတွေ ပြန်ထွက်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် စာသားတွေ ပြန်ဖျောက်ရမှာပေါ့။
ချစ်ဦးပုံပြင်ထဲမှာတော့ fade out ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာလဲ အပေါ်မှာ ပြောသလို shadow effect
ထည့်ပါမယ်။ ညာဘက်ကအကွက်လေး ၂ကွက်မှာ အစိမ်းရောင်လေး တွေ့ရင်တော့ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး
ချစ်ဦး ပုံပြင်မှာ စာသားလေးကြောင်းလောက် မှာ အကုန် တပြိုင်တည်း ထွက်တာ ဆိုတော့ စောနက
Effect Fade out ကို ကော်ပီ ယူပီး အဲဒီ Effect အောက်တည့်တည့် မှာ Paste Effect လုပ်လိုက်ပါ။
တညီတည်း ထည့်ထားတဲ့ ပုံပါ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ စာသားတွေ နောက်ခံ shadow တွေ
အဲဒီတိုင်း ထည့်သွားလို့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။ ဒါဆိုရင် save လုပ်ပါမယ်။ save လုပ်တဲ့
ပြန်ပြင်ရင် ဖွင့်တဲ့ swi ဖိုင်ပါ။ အခုတော့ ဆိုဒ်မှာ မတင်သေးပဲ ရိုးရိုး swi ဖိုင်နဲ့ သိမ်းပါမယ်။
Export လုပ်နေချိန်မှာ တခြား ဆော့ဝဲတွေ ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိစက်က Hardware ပိုင်း
နောက်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ open ကနေ wskt swi ကို ရှာပီး ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်
ကဲ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။ ပုံပေါင်း 33 ပုံ နဲ့ တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ နားမလည်
ခဲ့ရင်တော့ အနော် ထုပ်ထုပ် ညံ့ သေးလို့သာ ဖြစ်ပါကြောင်း...........................
Posted by Thurainlin at 13:57